ဘယ်မှာဝယ်သလဲလို့ မေးနည်း (How to ask someone where they got that) - Myanmar Network
ဘယ်မှာဝယ်သလဲလို့ မေးနည်း (How to ask someone where they got that)
Added by Saw Hosea on September 30, 2009 at 13:00
ပစ္စည်းတွေ ဘယ်မှာဝယ်သလဲ သိချင်ရင် မှန်မှန်ကန်ကန် မေးတတ်အောင်ပါ။
Man: Hey, nice shoes! အမျိုးသား - ဟေး၊ ရှူးဖိနပ်က ကောင်းလိုက်တာ။ Woman: Thanks! အမျိုးသမီး - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Man: Could do withapair like that myself. အမျိုးသား - ကျွန်တော်လည်း အဲဒါမျိုးတစ်ရံလောက် ၀ယ်စီးချင်တယ်။ Woman: Oh really? They’re very comfortable. အမျိုးသမီး - တကယ်ပြောတာလား။ စီးလို့ သက်တောင့်သက်တာ သိပ်ရှိတာဘဲ။
Man: Yeah. Where did you get them? အမျိုးသား - အင်း။ ဘယ်မှာဝယ်တာလဲ။ Woman: Just that place on the high street. အမျိုးသမီး - လမ်းမတန်းက ဆိုင်မှာပါ။ Man: Oh yeah, I’ll have to go and takealook sometime. (Pause)
အမျိုးသား - သြော် ဟုတ်လား။ တစ်ခါလောက် သွားကြည့်ဦးမှဘဲ။
Man: Hey! အမျိုးသား - ဟိုလေ Woman: What? အမျိုးသမီး - ဘာလဲ
Man: I’ve been looking for that book for ages! အမျိုးသား - ကျွန်တော်အဲဒီစာအုပ်ကို ရှာနေတာ ကြာလှပြီ။ Woman: Really? အမျိုးသမီး - ဟုတ်လား။
Man: Yeah...where did you get it? အမျိုးသား - ဟုတ်တယ်၊ ဘယ်မှာ ၀ယ်တာလဲ။ Woman: I bought it online. I just didasearch and found it, you know... အမျိုးသမီး - အင်တာနက်က ၀ယ်လိုက်တာ။ အင်တာနက်မှာ ရှာလိုက်တော့ တွေ့တာဘဲလေ။
Man: Really? အမျိုးသား - ဟုတ်လား။ Woman: Yes. It’s not that difficult. အမျိုးသမီး - အင်းပေါ့။ သိပ်မခက်ပါဘူး။ Man: I’ll have to havea look. (Pause)
|အမျိုးသား - ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ဦးမယ်။
Man: That’satasty-looking sandwich! အမျိုးသား - အသားညှပ်မုန့်က အရသာရှိမယ့် ပုံဘဲ။ Woman: It’satasty-tasting sandwich too... အမျိုးသမီး - အသားညှပ်မုန့်က တကယ်လည်း အရသာရှိပါတယ်။
Man: Where did you er... အမျိုးသား - ဟိုလေ ... ဘယ်ကနေ ... Woman: Where did I get it? အမျိုးသမီး - ဘယ်က ၀ယ်သလဲလို့ မေးမလို့လား။
Man: Yeah! That’sexactly what I was going to say....! အမျိုးသား - ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒါဘဲ မေးမလို့။ Woman: I made itmyself. အမျိုးသမီး - ကျွန်မကိုယ်တိုင် လုပ်တာ။ Man: Oh. အမျိုးသား - သြော်။
Woman: Here – have it! အမျိုးသမီး - ဒီမှာ၊ စားပါဦး။
Go to http://learnenglish.britishcouncil.org/en/how/how-ask-someone-where-they-got-that for vocabulary, comprehension tasks and other videos.
Like 91 members like this
Comment by Kyi Thar on May 5, 2013 at 15:10 thanksalot. Comment by HninMyatNwe on April 20, 2013 at 14:21 thanks
Comment by maythu on April 18, 2013 at 15:25 thanks Comment by ei ei khaing on March 29, 2013 at 17:56 Many thks for these programs Comment by Zaw Linn Maung on March 25, 2013 at 15:22 Like this. thank
Comment by May on March 18, 2013 at 14:38 Good lessons , thanks Comment by kyi kyi sein on March 18, 2013 at 14:25 good simply dialogue,do share it .:) Comment by ju ju on February 13, 2013 at 13:54 Thank Comment by khinekhine on February 11, 2013 at 15:32 Thank
Comment by Yin Min Myint Z∂w on December 26, 2012 at 23:33 thanks ‹ Previous